Indlu yaseFama kwiFama eNyumayo yeNyanga - I-Airbnb
Indlu yaseFama kwiFama eNyumayo yeNyanga
Ifama sinombuki zindwendwe onguAlfred
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uAlfred iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
IFama iRising Moon ikwilali yaseTyler County eWest Virginia. Kumalunga neekhilomitha ezili-10 ukusuka kuMlambo iOhio kunye neekhilomitha ezingama-40 kumntla weParkersburg, WV kunye neekhilomitha ezisixhenxe kumzantsi-ntshona weMiddlebourne, WV.
Sinendlu endala yasefama enikezelwa “njengendawo yokuhlala/yokurhoxa efama” (akukho kutya). La ngamava asemaphandleni, aphakathi kwe-rustic - akukho TV, akukho intanethi, akukho nkonzo yeseli, akukho AC, kunye nobushushu kuphela kumgangatho wokuqala. Kodwa le yindawo entle yokuhamba, ukukhwela ibhayisekile, ukurhoxa, ukukhwela iintaka, amagcisa, abafoti, ababhali...
Ngamagumbi amane okulala (amawele ama-2, i-1 kabini, i-1 queen) sinokuhlalisa izibini ezi-2 kunye nee-singles ezimbini eziyimfihlo. Ngee-futon ezi-2 kunye nebhedi e-1 esongwayo kwiindawo eziqhelekileyo singakwazi ukuhlalisa ngakumbi ukuba awukhathali ukwabelana ngendawo yokulala kunye negumbi lokuhlambela elinye. Usenokugxumeka intente emva kweyadi ukuze ufumane indawo engakumbi. Ilungele iintsapho okanye amaqela asondeleyo ezihlobo kwindawo yokurhoxa. Kwakhona ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye negumbi lokuhlamba elinewasha kunye nesomisi. Izilwanyana zasekhaya eziziphethe kakuhle kunye nabantwana abaqolileyo bamkelekile.
Sinomsebenzi omncinci weentyatyambo kunye nemifuno, akukho zilwanyana zasefama. Wamkelekile ukuba uncede ukutsala ukhula. Okanye ungasondela kwindalo ezulazula iihektare ezingama-130 ngamaplanga, ibhrashi kunye namasimi. Okanye hlala nje ecaleni kwechibi lethu elincinci kwaye ucamngce. Ukongezelela kwiindidi ezininzi zeentaka, unokulindela ukubona (okanye ukuva) amaxhama, iiraccoon, iiopossum, iicoyotes, iinyoka, iizinambuzane, yaye ngamaxesha athile iinkomo zommelwane.
Asikuvumeli ukusetyenziswa kwezithuthi eziphuma endleleni (ii-ATVs, iiBhayikhi ezimdaka, njl. njl
Kukho amanqaku amaninzi anomdla kunye nemisebenzi ngaphakathi kweyure yokuqhuba: North Bend State Park & Rails to Trails, Blennerhassett Museum, quaint town of Marietta OH, Ohio River Islands National Wildlife Refuge, Sistersville imoto ferry, Tyler County Speedway kunye nokuhamba ngephenyane okanye ukuloba Middle Island Creek kunye Conaway Lake. Ngeentsuku ezinethayo sineencwadi nemidlalo emininzi.
My wife, Chris Hoke and I moved to our rural farm property about 15 years ago from the big city life in Pittsburgh. My wife is an artist and I joined her in my second career as an artist/crafts person selling our original handmade rustic furniture and garden accessories in juried art shows in WV and surrounding states. Since then, we have migrated to growing and selling specialty cut flowers and are now moving more into produce, mainly for ourselves, and a place for eco-tourism. So we are "semi" retired, but maintaining the farm, farmlands, and farmhouse still feels like a full time job.
My wife, Chris Hoke and I moved to our rural farm property about 15 years ago from the big city life in Pittsburgh. My wife is an artist and I joined her in my second career as an…
Sihlala kwisiza kwaye sihlala sisebenza ezigadini kwaye senza imisebenzi yethu yelizwe. Singakuvuyela ukukunika ulwazi kunye nezalathiso kwimidla yendawo okanye uphendule eminye imibuzo onokuba unayo. Wamkelekile ukuba uthathe inxaxheba kwimisebenzi yethu yasekhaya okanye siya kukunika indawo yakho yokucamngca ngasese njengoko unokukhetha.
Sihlala kwisiza kwaye sihlala sisebenza ezigadini kwaye senza imisebenzi yethu yelizwe. Singakuvuyela ukukunika ulwazi kunye nezalathiso kwimidla yendawo okanye uphendule eminye im…